Madaxweyne Farmaajo oo amar siiyay hay’adaha amaanka kadib weerarkii Kismaayo – Somali Top News
Madaxweyne Farmaajo oo amar siiyay hay’adaha amaanka kadib weerarkii Kismaayo
July 13, 2019 July 13, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehellada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayey weerarkii argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha ayaa u rajeeyey dadka dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkan arxan darrada ah in uu Alle u boogo dhayo, isagoona Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku jiheeyay in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso dadka ay culus tahay xaaladdooda caafimaad.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Weerarkan argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadawga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeenna iyo guud ahaan dadkeenna.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray hay’adaha ammaanka heer Federaal ee ku sugan Jubbaland iyo kuwa heer dowlad Goboleed in ay sare u qaadan feejignaantooda oo ay sugaan amniga, kana hor tagaan falalka bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku doonayaan in ay ku wax-yeelleeyaan amniga Jubbaland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay bulshada Jubbaland in ay xoojiyaan midnimadooda iyo wadajirkooda, siina joogteeyaan la shaqeynta laamaha ammaanka, si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaannada oo ay ku soo food leedahay doorashada Madaxtinimo ee Jubbaland.
← Ciidamada amniga oo soo afjaray weerarkii ka dhacay Kismaayo oo khasaaraha ka dhashay uu sii kordhay
Musharax katirsan doorashada Jubbaland oo shaaciyay xogo xasaasi oo ku saabsan weerarkii Kismayo →
Dabaylo xoogan oo ku dhuftay magaalada Goroowe
August 14, 2018 Somali Top News 0
Ciidamada amniga Jubbaland oo fashiliyay qarax miino
January 23, 2019 January 23, 2019 Somali Top News 0
Gudoomiye Mursal oo booqday xarunta cusub ee Golaha Shacabka
June 21, 2019 Somali Top News 0